मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिगको उपाधी झापालाई - Purbeli News
मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिगको उपाधी झापालाई
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ ३१, २०७६ समय: २१:४६:५५
धरान । मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी झापाको सैनिक युथ क्लबले जितेको छ । मंगलबार धरान रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा २–१ गोल अन्तरले मोरङको बेलबारी फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधी जितेको हो । उपाधीसँगै झापाले नगद रु ५ लाख र ४ केजी चाँदीको रनिङ ट्रफि हात पारेको छ । उपाधी जितेको सैनिक युथ क्लबले एन्फा प्रेसिडेन्ट कप खेल्नका लागी एक नं. प्रदेशबाट छनौट भएको छ ।
उपविजेता भएको मोरङको बेलबारी फुटबल क्लबले नगद रु ३ लाख पुरस्कार जितेको छ । प्रतियोगिताको सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी बेलबारी फुटबल क्लबका भूषण सुब्बा घोषित भए । उनलाई नगद रु १ लाख प्रदान गरिएको थियो । फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच बेलबारीका सौरभ कार्की घोषित हुँदै नगद रु १० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे । त्यस्तै गरी प्रतियोगिताको बेष्ट गोल किपर झापाका मनोज प्रधान, बेष्ट स्ट्राइकर झापाका विकेश लिम्बू, बेष्ट कोच झापाका प्रवेश कटवाल र बेष्ट डिफेन्स झापाका विमान प्रसाद राई घोषित भए भने धरान फुटबल क्लबका उमेश राई प्रतियोगिताको बेष्ट मिडफिल्ड घोषित भए । उनीहरुलाई जनही २५ हजार नगद सहित ट्रफि पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कप प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना एन्फाले गरेको थियो भने संयोजन एक नं. प्रदेश सरकारले गरेको थियो । एन्फा र प्रदेश सरकारको सम्झौता अनुसार एक नं. प्रदेशबाट एन्फा प्रेसिडेन्ट कपमा २ टिम सहभागी हुने सम्झौता भएको छ । एक नं. प्रदेशबाट २ टिम र अन्य प्रदेशबाट एक÷एक टिम सहभागी हुने एन्फा प्रेसिडेन्ट कपका उत्कृष्ट ४ टिमले राष्ट्रिय लिग खेल्ने एन्फाका सहायक महासचिव बसन्त अर्यालले जनाएका छन् ।